Klas nke iri nke 10 kacha mma na NYC na 2020 - Ezinụlọ
Ngwaahịa Nri Jụọ Ọkachamara Ejiji News Teknụzụ Na Akụkọ Nke Nrụgide Agba Anya Gynaec Ihe Ndozi
Klas nke iri nke 10 kacha mma na NYC
New York na-etu ọnụ maka ọtụtụ ụlọ nri Michelin atọ na Pizza kasị dị ọnụ ala n’ụwa - ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na obodo a juputara na obere gourmands na budding chefs. Ma ma ịchọrọ ka nwa gị malitere ịmalite ịdị arọ ya ma ọ bụrụ na ị na-enyere aka na nri abalị ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịme ka nwa gị na-ahụ n'anya nke dumplings, ị ga-ahụ ụlọ ọrụ aka na-arụ ọrụ nke dabara na ụgwọ ahụ. Site na uto rue savory, gụọ maka iri n'ime klas ụmụaka kacha mma na New York. (Daashi: A na-eme ọgba aghara na kichin onye ọzọ.)
Njikọ: Klas Kasị Mma nke 8 maka Kidsmụaka nọ na NYC
Site n'ikike nke Cooklyn
1. Cooklyn Kitchen (Cobble Ugwu)
Na-ekwu na ama: Schoollọ akwụkwọ a na-esi nri nke a na-esi nri bụ ịkụziri ụmụaka ịkwadebe nri dị ụtọ ma dị mma ha ga-achọ iri, kesaa ma nwee obi ụtọ. Iji ihe ndị dị na mpaghara eme ihe kachasị mkpa, nke mere na ọtụtụ nri na kichin na-esite na ndagwurugwu Hudson ma ọ bụ East End of Long Island.
Kachasị mma maka afọ: 9 na elu
Klas nke standout: Mgbe ụlọ akwụkwọ gachara. Maka ụmụaka na ụmụ agbọghọ, nke a na-enye ụzọ dị mma iji malite ịmalite usoro dị mkpa maka osi nri ụlọ. Offọdụ isiokwu ndị kasị ewu ewu bụ nri ndị Italiantali na Mediterenian — ma, n'ezie, desserts.
153 Amity St. , Brooklyn; isi nri
2. 92Y (Upper East Side)
Na-azọrọ na ama Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị maara ụlọ elu obodo a maka ụlọ akwụkwọ ọta akara na-achọsi ike, Y na-enyekwa ọtụtụ klaasị klaasị maka ezinụlọ. Na mmemme nri, obere ụmụaka na-amụta ntọala dị ka mgbutu, grating, igwakorita na ịpị. Mụaka toro eto, ka ọ dị ugbu a, nwetakwara obere sayensị ebe ahụ, mgbe ha mụtara gbasara ederede, okpomoku na olu.
Kachasị mma maka afọ: 2 ruo 4
Klas nke standout: Inmụaka nọ na kichin. Tmụaka na-amụ ije na-amụta otu esi eme ihe niile site na achịcha banana ruo achịcha zucchini, gbakwunyere oge akụkọ mgbe ha na-eche ka ihe okike ha ghee n’ime oven.
1395 Lexington Okporo ụzọ.; 92y.org
Site n'ikike nke Freshmade NYC
3. NYC ọhụrụ (Soho)
Na-ekwu na ama: N’ebe a na-enwe obi ụtọ na Studio, ụmụaka dị ka ndị na-eto eto dị ka 2 nwere ike ịchọpụta otu esi adị mfe (ma na-atọ ụtọ) iji mee nri nke gị. N'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, klaasị ndị ntorobịa na-akụziri ụmụaka otu esi azụ ahịa maka ihe ndị kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ọbụna mụta usoro ịkpa akwa kwesịrị ekwesị iji mee ka ihe okike ha bụrụ ọkachamara.
Kachasị mma maka afọ: 2 ruo 15
Klas nke standout: Palate-palette. N'ime klaasị elekere a, ụmụaka dị afọ 2 ruo 5 na-esi nri na nka, na-eji ma okpo ọnụ ha edetụ ihe na palette ha iji mepụta. (Mara mma, nri?) Ha na-ahapụ ọ bụghị naanị site na nri kamakwa ọrụ ọrụ nka.
636 Broadway, Ste. 516; ọhụrụmadenyc.com
4. Na-arịa Salad (Otutu ebe)
Na-ekwu na ama: Usoro mmemme a na-akwado klaasị n'ụlọ oriri na ọ publicụ andụ na ebe ọha na eze dị ka veranda nka, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ubi obodo. Ebumnuche bụ ime ka ụmụaka nwee obi uto iri nri ha ma tufuo nri na-adịghị mma nke salad. Site na mmemme ụlọ akwụkwọ ya, ụlọ ọrụ ahụ na-enwe klaasị maka ụmụ akwụkwọ 10,000 kwa afọ.
Kachasị mma maka afọ: 4 na elu
Klas nke standout: Master Chef klaasị. Ndị a na-kwadoro n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ebe siri nri na-eduga a aka-na ngosi nke na-akuziri ụmụaka ihe na-agba ọsọ kichin dị ka n'ezie. Na FYI: Ezi ntụziaka mgbe niile anaghị eri anụ na ego ọ na-eri.
Ọnọdụ dị iche iche; nfụkasịr
Site n'ikike nke Eataly
5. Eataly (Flatiron na Financial District)
Na-ekwu na ama: Na ụlọ arụsị ndị a ejima Italiantali, ọbụna obere pasta fiends nwere ike ịbanye na nri omume. Na mgbakwunye, mgbe klaasị, ị nwere ike ịzụ ahịa ụlọ ahịa ahụ ka ịchekwaa ihe niile ị ga-eji megharịa efere n'ụlọ.
Kachasị mma maka afọ: 6 ruo 12
Klas nke standout: Art nke Mini Pizza. N'ime klaasị elekere a, ụmụaka na-amụta akụkọ ihe mere eme nke otu n'ime mbupụ kachasị mma nke andtali wee nwaa aka ha ịme obere mini ha. Ka achịcha na-eme achịcha, a na-emeso ụmụaka ihe ngosi mgbatị mozzarella na (Mozamrella Lab) nke akpọrọ aha ya.
Otutu ebe; erialy.com
6. Sholọ ahịa Dynamite (Park Slope)
Na-ekwu na ama: Inggba ụgwọ onwe ya dị ka ụlọ oriri na-eri nri maka ndị na-eto eto na ndị nọ n'afọ iri na ụma, ebe a dị na Brooklyn gụnyere kichin nkuzi, ọbá akwụkwọ nke onye na-esi nri, ogige azụ na kọfị. E wezụga ịkụziri ụmụaka etu esi esi nri, ndị nkuzi na-achọkwa inyere ụmụ akwụkwọ ha aka ịghọta etu nri siri daba na mpaghara ọdịbendị buru ibu.
Kachasị mma maka afọ: 8 na elu
Klas nke standout: Mee & Were. N'ime usoro ihe omume nke ụlọ akwụkwọ a, ndị isi na-amalite ịkwadebe nri abalị maka mmadụ ise kwa izu. Ntụziaka na-agụnye ihe niile site na lasagna ruo na pies, ma mesiri ike bụ ịkụziri ụmụaka ka ha kee ihe na kichin.
487 Seventh Ave., Brooklyn; nnachi.com
Site n'ikike nke ICC
7. Clọ Ọrụ Culinary International (Soho)
Na-ekwu na ama: Ọ bụrụ na nwa gị dị oke egwu ịchụso ọrụ dị ka onye siri nri, ọ nweghị ebe ka mma ịnwale mmiri karịa ụlọ akwụkwọ nri nri a dị na ime obodo. Nkuzi ebe a bu ihe siri ike, mana umu akwukwo putara ihe site n’igbu ndi mmadu.
Kachasị mma maka afọ: 13 ruo 18
Klas nke standout: Ogige nri maka ụmụaka. Mmemme ụbọchị ise a siri ike na-amalite site na nchekwa mma ma kpuchie ihe niile site na braising na poaching. Thegwọ ahụ gụnyere ego nke onye siri nri na nri ezinụlọ nke ụmụ akwụkwọ mmemme mmemme na-esiri.
462 Broadway; internationalculinarycenter.com.
8. Gym Time's Kitchen Little Cooking School (Oke East Side)
Na-ekwu na ama: N’ebe mgbago ugwu a, ihe okike na isi nri na-agakọ; Ihe mgbaru ọsọ ebe a abụghị izu okè kama nchọpụta. Kidsmụaka ndị dị ka afọ 2 nwere ike were klaasị na onye na-elekọta ha, ebe ha na-arụ ọrụ ọfụma na oke ọrụ dị ka ha na-amụta ịwụfu, tụọ ma kpalite. Onye ọ bụla na-ahapụ nri nke ọbụna ndị okenye ga-ahụ n'anya.
Kachasị mma maka afọ: 2 ruo 5
Klas nke standout: Inmụaka nọ na kichin. A na-enweta klas a maka ụmụaka dị ka ndị na-eto eto dị ka afọ 2 mana nkewa kacha ochie (5 na karịa) bụ klaasị klaasị. Nke ahụ pụtara na obere ndị isi ahụ na-anya isi maka ihe ha mepụtara na mmemme ụlọ akwụkwọ a, nke na-ekwusi ike na mgbakọ na mwepụ na sayensị.
1520 York Okporo ụzọ ; mgbatị.net
Site n'ikike nke Milk Bar
9. Mmiri ara ehi Ogwe (Williamsburg)
Na-ekwu na ama: Kuki ndị ọkacha mmasị na Instagram na achịcha bụkwa nnukwu nsogbu na ụmụntakịrị. N’ebe a na-eme achịcha a hụrụ n’anya na Brooklyn, ụmụaka dị ka 3 nwere ike ịmụta etu esi atụgharị achịcha achicha nke ha ma ọ bụ jiri kuki eji achicha chọọ kuki ama. FYI: A na - ahapụ nwatakịrị ọbụla n’erughị afọ iri isonye na klaasị ndị okenye ma ọ bụrụhaala na onye toro eto ha na ha nọ.
Kachasị mma maka afọ: 3 ruo 12
Klas nke standout: Ogige Milk Ogige: Makingmepụta Truffle. Klaasị elekere a na-akụzi obere ndị na-eme achịcha ihe nzuzo dị n’azụ otu n’ime ihe ndị na-eri ahụ Milk Bar: achicha achicha bara ezigbo uru. Studentsmụ akwụkwọ na-eme ihe iri na abụọ B'Day ma ọ bụ Chocolate B'Day truffles, ọbụnakwa na-enweta ite nke fesa iji laa n'ụlọ.
55 Olile anya St, Brooklyn; mmelbarstore.com
10. Chocolates Roni-Sue (Lower East Side)
Na-ekwu na ama: Shoplọ ahịa chocolate a a na-asọpụrụ na-eburu ihe niile site na truffles siri ike ruo ọtụtụ ụdị nke buttercrunch a ma ama. Ma ọ bụ ezie na ọ bụ kichin na-arụ ọrụ ma ọ bụghị ụlọ akwụkwọ, onye nwe ya Rhonda Kave na-enye klas maka ọbụna ndị na-eto eto na-eto eto.
Kachasị mma maka afọ: 3 na elu
Klas nke standout: Klaasị nke onwe. Kpọtụrụ Kave iji hazie klas zuru oke maka afọ ụmụaka gị (ya bụ, nlebara anya) na mmasị chocolate. Obere obere akpụkpọ anụ nwere ike iri nri karịa ịchọ mma, mana klaasị enyere maka ụmụ agbọghọ na ndị ntorobịa nwere ike igosipụta ọrụ nka nke na-abanye na bonbons.
148 Forsyth St. ; roni-sue.com
Njikọ: Kidlọ oriri na ọ NYụ Kidụ KidC-Friendly Friendly 5-Friendly Friendly ebe ị ka ga-enwe mmetụta dịka okenye
Categories Jụọ Ọkachamara Femina Power Brands Akpụkpọ Anụ
ga na-ekiri ihunanya bekee fim
top bekee ihunanya fim
top 10 ịhụnanya akụkọ fim Hollywood
nkịta dị ụkọ n'ụwa
dị iche iche edozi isi maka ụmụ nwanyị